ဒဂုန်မြို့သစ်မှာ မြေမသိမ်းတော့ဟု တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဆို
Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > သတင်း > ပြည်တွင်းသတင်း > ဒဂုန်မြို့သစ်မှာ မြေမသိမ်းတော့ဟု တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဆို
ဒဂုန်မြို့သစ်မှာ မြေမသိမ်းတော့ဟု တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဆို	မင်းသက်	| ကြာသပတေးနေ့၊ ဧပြီလ ၂၆ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၈ နာရီ ၃၆ မိနစ်	ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ရန်ကုန်တိုင်း၊ ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်တွင် မြေကွက်များကို သိမ်းတော့မည် မဟုတ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်ဆွေ က ပြောသည်။ဧပြီလ ၂၅ ရက်နေ့ ပထမအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် အထူး အစည်းအဝေးအပြီးတွင် သတင်းမီဒီယာ များအား ပြောကြားလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။“ကျနော်တို့က သက်ဆိုင်ရာ အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးမှုး ဦးစီးမှူး အဆင့်ရှိတဲ့ အရာရှိတွေကို အဲဒီမှာ စာရင်းပြုစုစေ ပါတယ်။ စနစ်တကျ ဖြစ်အောင်တော့ လုပ်ပါမယ်။ ဒါပေမယ့် ဝန်ထမ်းတွေ မြေကွက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အိမ်ဆောက် ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ် မသိမ်းတော့ပါဘူး။ ဒါကလည်း အစက အိုးအိမ်က လုပ်လိုက်တဲ့အတွက် ရှုတ်သွားတာပါ”ဟု ဦးမြင့်ဆွေ က ပြောသည်။မတ်လ ၇ ရက်နေ့က နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာများမှတဆင့် ထုတ်ပြန်ချက်အရ အထူးစိုက်ပျိုးရေးဇုန် စီမံကိန်း အတွက် ဒဂုန်မြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ မြေတိုင်းအမှတ် ၁၁ ခုမှ မြေကွက်ပေါင်း ၈,၀၀၀ ကျော်ကို ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ အိုးအိမ်ဦးစီးဌာနမှ သိမ်းမည်ဟု ပါရှိသည်။“အခု လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးတွေ လုပ်နေတာကိုလည်း ရပ်ခိုင်းလိုက်ပြီ။ မသိမ်းပါဘူး။ အထောက်အထား ခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့ ရှိနေတာကို ဒီအတိုင်းပဲ ထားမှာပါ။ ဘာမှ မလုပ်တော့ပါဘူး။ အခု လုပ်နေတဲ့ စိုက်ပျိုးရေးတွေ ရပ်နေပါပြီ” ဟု ဝန်ကြီးချုပ်က ပြောသည်။အဆိုပါ ပေ ၄၀ ပေ ၆၀ အိမ်ရာကွက်များကို ဖေါ်ကာ အငြိမ်းစား ဝန်ထမ်းများကို အစိုးရက ၁၉၉၈ ခုနှစ်က ကျပ် ၁၂,၀၀၀ နှုန်းဖြင့် မြို့သစ်အဖြစ် နေရာချထားပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ယခုအခါ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှ ဦးစီးမှူး ၇ ဦးက မှတ်တမ်းကောက်ထားသည့် စာရင်းများအရ အဆိုပါမြေကွက် အမှတ်များပေါ်တွင် အကွက်အလိုက် ကျူးကျော် နေထိုင်သော အိမ်အလုံးရေ ၇၂ လုံး၊ မြေဂရမ် ရရှိပြီးသား နေအိမ် တလုံး၊ မြေချပါမစ် အထောက်အထားဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော နေအိမ် ၂၈၂ အိမ် စုစုပေါင်း ၃၅၅ အိမ် ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။“ဝန်ထမ်းတွေထံက တဆင့် ဝယ်ပြီး အိမ်ဆောက်နေတဲ့ သူတွေလည်း ရှိတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အထောက်အထားတော့ ရှိရမယ်။ ဘာတွေ ဆက်လုပ်မလဲဆိုတာနဲ့ ဘယ်လို ညွှန်ကြားမယ်ဆိုတာ အစည်းအဝေး လုပ်ပါမယ်။ ပြီးရင် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်တွေကနေ အကြောင်းကြားပါမယ်။ ကျူးကျော်တွေကို ဘယ်လိုလုပ်မယ် ဆိုတာလည်း အစည်းအဝေး လုပ်ရဦးမယ်”ဟု ဝန်ကြီးချုပ်က ပြောသည်။သို့သော် သီးခြားစုံစမ်းလေ့လာမှုအရ အဆိုပါမြေကွက်များတွင် အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၈,ဝ၇၉ စု နေထိုင်လျက်ရှိသည်ဟု အလုံမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးခိုင်မောင်ရည် က ပြောသည်။အိုးအိမ်ဦးစီးဌာနမှ သိမ်းယူမည်ဆိုသည့် ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့ လွှတ်တော်တွင် ဦးခိုင်မောင်ရည် က မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သဖြင့် အထောက်အထားများဖြင့် ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်အား ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌက တောင်းခံ၍ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများနှင့် အတူ မတ်လ ၁၇ ရက်နေ့က သွားရောက်တွေ့ဆုံ စုံစမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဦးခိုင်မောင်ရည်က ပြောသည်။
လူဦးရေစာရင်း ကောက်စဉ် ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်မှုဖြင့် ဖမ်းထားသူ ၇ ဦးကို တရားစွဲတင်
ပထမဆုံး ပြည်တွင်း၌ ပြုလုပ်မည့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲ KIO မှကြိုရောက်
၁၉၉၀ NLD အမတ်အား PNLO ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်
စစ်တွေတွင် အိန္ဒိယ၏ ကောင်စစ်ဝန်ရုံး ဖွင့်မည်	လူ့အခွင့်အရေးနေ့တွင် ဦးအောင်မင်း လက်ရှိအခြေအနေ ရှင်းပြ	ပုဂ္ဂလိက စိုက်ခင်းများ လျှောက်ထားရယူကာ အပြည့်အဝ မစိုက်ပျိုးခဲ့ကြ	ဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်း တို့ စင်္ကာပူ လေ့လာရေးသွား	ဝန်ကြီး ကတိမတည်ဟု ဆိုကာ တိုင်းရင်းကျောင်းသားများ ဆက်လက်ဆန္ဒပြ	နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရန် KIO ဘက်မှ အကြောင်းမပြန်နိုင်သေး	ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း ABSDF အပါအဝင် အခြားအဖွဲ့များနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ တွေ့ရန်ရှိ	Who is Online
We have 98 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved